Kylian Mbappe oo xaqiijiyay in wadahadalada la furay Arsenal,ka hor inta uusan ku biirin PSG
Thursday, July 19th, 2018 - 07:07:21
Thursday September 07, 2017 - 10:57:15 in Wararka by MM Shooble
Kylian Mbappe ayaa xaqiijiyay in jirto in uu iska diiday fursad uu ku biiri lahaa Arsenal xagaaga suuqa kala iibsiga markii uu furnaa ka hor inta uusan ku biirin PSG.
18 jirkaan ayaa xilli ciyaareedkii hore dhaliyay 26 gool tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii hore markii uu ka mid ahaa AS Monaco, isagoo kooxda ka caawiyay inay hanato horyaalka Ligue 1,iyo in aygaaraan semi-finalka Champions League.
Kooxo dhowr ah ayaa lala xiriiriyay xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska, laakiin Paris Saint-Germain ayaa ku guuleysatay tartanka loogu jiro adeegiisa, isagoo saxiixay heshiis amaah ah xilli ciyaareedka soo aadan noqon doono kan ugu qaalisan dunid.
Mbappe ayaa xaqiijiyay inuu wadahadalo la yeeshay macalinka Arsenal Arsene Wenger intii lagu jiray xagaagii, lakiin weeraryahanka ayaa sheegay in PSG inay had iyo goor tahay doorka ugu fiican uu qaatay.
"Haa, waxaan la kulmay Arsene Wenger, waa tababare weyn, wuxuu leeyahay sumcad weyn oo uu ku leeyahay Faransiiska, waa uu ixtiraam badan yahay, waana ogyahay sida loo horumariyo ciyaartoyda da'da yari. Saint-Germain ayaa ah doorka ugu weyn, "ayuu Mbappe u sheegay Telegraph.
"Waxaan miisaameynay faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka naadiyada oo dhan, laakiin qoyskeyga ayaa ii sheegay inay tahay go'aankeyga iyo midka aan u baahanahay inaan sameeyo, sidoo kale waa inay noqotaa go'aan waqti dheer ah, sidaasi darteed aniga iyo aniga waan go'aansaday inay halkansii joohosian hormar sii sameeyo"
PSG ayaa ku qasbanaan doonta inay bixiso £ 166m ,ayadoo uu Mbappe heshiis joogto ah saxiixi doono xili ciyaareedka danbe.